"Haasaan ministira muummicha abdii nutti horeera" - Jiraattota magaalaa Adaamaa keessaa
Tajaajila intarneetii saffisiisuuf hojjetamaa jira - Saturday, 23 June 2018 00:30
Tola ooltummaa gocha miira hirkattummaa dhabamsiisu - Saturday, 23 June 2018 00:27
Qarannooleen Yunivarsitii Jimmaa rakkoolee hawaasaa furaa jiru jedhame - Saturday, 23 June 2018 00:25
Rakkoolee sirna haqaa qo’annooon furuuf hojjetamaa jira - Saturday, 23 June 2018 00:21
Bajata bara 2011fi yaaddoowwansaa - Saturday, 23 June 2018 00:18
Adaamaa: Biyya keessaa hanga biyya alaatti, dargagootarraa hanga ga'eessotaafi jaarsotaatti oduun ijoon torbaan kanaa muudamuu Doktar Abiyyi Ahmadiifi haasa isaan guyyicha taasiseen kan wal qabatuudha.
Dandeettiiwwan hogganaan tokko qabaachuu qabu keessaa inni tokko haasaa bilchaataa ummata amansiisuufi abdachiisu danda'u yemmuu ta'u, kunis amantaan ummanni isaanirratti qabu akka dabalu taasisa.
Haaroomsa gadi fagoo paartiin biyya bulchu taasisaa tureen murtiiwwan fudhatamani bal'achaa dhufuu kan himan jiraattoonni magaalaa Adaamaa, keessattuu gaafa Dr Abiyyi Ahmad Durataa'aa ADWUI ta'anii filatamanii kaasee abdii jijjiiramaa horachaa dhufuusaanii ibsu.
Haasawaan Dr Abiyyi Ahmad gaafa muudamaa paarlamaadhaaf taasisan isa dur baratameen adda ta'uu kan himan jiraattuun magaalattii Aadde Geexee Kafanii, mamii tokko malee rakkoolee biyyattii muudatan ifatti dubbachuunsaanii furmaatasaatiifis ni hojjatu jedhanii kan amanan ta'uu dubbatu.
Keessattuu haasoofni ministirri muummichaa dhimma dubartootaan walqabsiisuudhaan dubbatan haadhoolii hedduu kan boosise ta'uu himanii, dubartootaaf kaka'uumsa cimaafi abdii kan itti hore ta'uu ibsu.
Muudamuusaaniitiin walqabatee rakkoolee waggoottan darban keessatti mul'achaa turan ni furu jedhanii kan abdatan ta'uusaafi kanaaf immoo ummanni hundi isaan cinaa dhaabbachuu akka qabu himu.
Guddinni biyyaa dargaggeessa hinhirmaachifne eessallee ga'uu kan hindandeenye ta'uu ifatti dubbachuunsaanii qofti ergaa guddaa kan qabu ta'uu kan himan immoo jiraataan magaalattii inni biraa dargaggoo Jamaal Abdii, kun immoo kutannoo isaan furmaatasaaf qaban kan agarsiisu ta'uu dubbata.
Bakka gaaffiin ummataa keessattuu kan dargaggootaa hindeebinetti negeenyiifi tasgabbiin yaadamu kan hinjirre ta'uu kan himu dargaggoon kun, kanaaf immoo tarkaanfiileen sirreeffamaa hedduu ministira muummichaan fudhatamuu kan qabu ta'uu ibsa.
Rakkoon biyyattii keessa jiru bal'aa ta'uusaatiin hojiin ministira muummichaaf hojii ulfaataa ta'uusaafi kun immoo kutannoofi qophii cimaa ta'e kan barbaachisu ta'uusaatiin tumsi hawaasa bal'aafi qophiin paartiin biyya bulchu jijjiiramaaf qabu murteessaa ta'uu dubbata.
Ministira Muummichaas waan haasa'an akka hojitti jijjiiraniifi haalota waggoota darban biyyattii keessa turan sirreessuudhaaf sochii taasisaniifis dargaggoonni hundi tumsuu kan qaban ta'uus ni hima.
Torban kana/This_Week 43527
Guyyaa mara/All_Days 1468307